Sida ugu wanaagsan ee ay u soo kabtaan tirtiray Notes on iPad 2 iyo iPad 3
> Resource > iPad > sida ugu wanaagsan ee ay u soo kabtaan tirtiray Notes on iPad 2/3
Xaaladaha khasaaro Data
"Ma karaysaan inaad ka soo kabsado qoraalada tirtiray on iPad ah 3? Waxaan leeyahay dhowr qoraalo muhiim ah si qalad ah la tirtiro ka iPad 3. ma ahan in aan raad raac u ah. Hadda, waxaan la yaabanahay haddii ay jirto wax fursad ah aan iyaga dib u soo ceshano karo. baryayaaye, i sii talooyinka. "
Waxaa jira xaalado badan oo soo gaartay xogta kor ku xusan. Marka aad ka iPad tirtiray qoraalada, waxaa jira qaar ka mid ah talooyin aad u baahan tahay in aad maskaxdaada.
2 talooyin waxtar leh khasaaraha xogta
1. Calan aad iPad galay hab diyaarad si degdeg ah.
2. Jooji isticmaalka aad iPad wax.
Xasuusta labadan talooyin idiin xaqiijin karaa fursad fiican u soo kabsanaya qoraalada tirtiray on iPad 2 iyo iPad 3. Marka aad sii waddo isticmaalkooda iPad ah, waxaad samayn doonaa xogta cusub ku yaal. Xogta lumay runtii aado oo kaliya marka la overwritten. Sidaa darteed, waa mid aad u muhiim ah in iPad ka loo isticmaalo ka hor inta aadan soo kabsado galkaaga lumay waxaa ku ilaaliyo.
Waxa aad u baahan tahay qoraalada soo kabsaday on iPad 3/2
Wondershare Dr.Fone ee macruufka , Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac)
Waxaad kala soo bixi kartaa version maxkamadda hoose si aad u leeyihiin isku day ah oo lacag la'aan ah.
Kabsado qoraalada tirtiray ka iPad 2/3 iPad in tallaabooyinka
Waxba ma waxaad isticmaali version Windows ama version Mac of Wondershare Dr.Fone ee macruufka, interface ee barnaamijka iyo tallaabooyinka soo kabashada la mid yihiin. Taasi waa in la yidhaahdo, buugan ku haboon yahay soo kabsaday qoraalada ku iPad 2/3 ee Windows iyo Mac OS X.
Wondershare Dr.Fone Ee macruufka siinayaa laba nooc oo ah hab-kabashada: kabsado Device macruufka iyo soo kabsado Lugood ee kaabta File. Tan iyo markii aadan haysan ah Lugood gurmad file, sida ugu wanaagsan ee waxa uu isku dayayaa inuu ka soo kabsado Device macruufka.
Tallaabada 1. Orod barnaamijka iyo xiriiriyaan iPad 2/3
Hadda, ordo barnaamijka on your computer ka dib markii ay ku rakibidda. Markaas xiriiriyaan iPad 2 ama iPad 3. Marka barnaamijka aqoonsan yahay iPad, waxa aad tusi doono suuqa kala ah sida soo socota.
Tallaabada 2. Sawirka aad iPad 2/3 iPad qoraalka la tirtiray
Next, waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa dhag siinaya batoonka soo bandhigay Start Scan ee suuqa ee kor ku xusan. Markaas barnaamijka noqon doonaa habraaca ku-aad ka baareyso iPad. Ha barkinta aad iPad waqtiga sawirka, ama waxaad u baahan doontaa inuu ku soo bilowdo ka badan.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha Leh ceshan qoraalada ku iPad 2/3 iPad
Marka scan ay ka badan tahay, oo aad ku eegaan kartaa qoraalada laga heli hor fulinaya soo kabashada. Riix Notes doorasho dhinaca bidix ee suuqa, oo aad halkaas ka akhrisan kartaa oo dhan qoraalada recoverable. Markaas sax waxyaabaha aad rabto iyo guji Ladnaansho button iyaga badbaadiya on your computer.